Bye Bye… Waqtiga Ay Manchester United Ku Dhowaaqaysa Eriga Mourinho Oo La Ogaaday | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Bye Bye… Waqtiga Ay Manchester United Ku Dhowaaqaysa Eriga Mourinho Oo La Ogaaday
(30-9-2018) Maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa isku diyaarinaya inay ku dhowaaqaan inuu shaqada ka tegay tababare Jose Mourinho kaddib natiijooyinkii ugu liitay rubuc-qani oo ay kooxdu ka keentay bilowga horyaalka Premier League.
Tababare Jose Mourinho ayaa la sheegay inay inuu shaqada ka tegi doono dhamaadka toddobaadkan, markaas oo maamulku ay soo saari doonaan war-saxaafadeed rasmi ah.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, ciyaartooyada iyo shaqaalaha kale ee naadiga ayaa barahooda bulshada ku wadaagay sheekaysi gaar ah oo ay iskaga xaal waraysanayaan mustaqbalka tababarooda, isla markaana ay ogyihiin inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey.
Mourinho ayaa go’aan argagax leh qaatay Sabtidii waxaanu liiska ciyaartooyadiisa ka reebay Alexis Sanchez oo caafimaad qaba, booskiisana waxa uu u xushay Scott McTominay, hase yeeshee waxa lagaga adkaaday 3-1 ay guushu ku raacday West Ham.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray in ciyaartooyada iyo shaqaaluhuba ay tirinayaan saacadaha kooban ee ka hadhay ku dhowaaqidda eriga Jose Mourinho, taas oo laga sugayo inuu soo saaro Woodward.
Dhinaca kale, Manchester United waxay raadinaysaa beddelka Jose Mourinho oo la warinayo inuu noqon doono Zinedine Zidane.